Mirador del Cañuelo iimbono ezimangalisayo zolwandle kunye nendalo - I-Airbnb
Mirador del Cañuelo iimbono ezimangalisayo zolwandle kunye nendalo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAquavia
Ijonge e-El Cañuelo kunye nolwandle, kwindawo yogcino lweNdalo nge-1h ukusuka eMálaga, i-El Mirador yindlu yasefama eyinyani eye yahlaziywa njengendawo yokuhlala enomtsalane kubantu aba-2 ukuya kwaba-4. Ubulula bokucwangcisa kunye nezixhobo ngomnye wamaxesha akudala, xa indlu yayiza kuhlalisa intsapho yonke. Namhlanje, igumbi lokuhlambela elihle neliphangaleleyo longezwe amanyathelo ambalwa ukusuka.
Indlu enkulu yenziwe ngegumbi elinye elihlulwe kwiindawo ezi-3: igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye nekhitshi. Akukho zixhobo ezingeyomfuneko kodwa
4.79 · Izimvo eziyi-19
Kwi-800m, ulwandle oluhle lwase-El Cañuelo yiparadesi yabakhenkethi kunye nabahambi elwandle abafuna ukusuka kwiindawo ezixineneyo zabakhenkethi.
Nge-15km, iNerja ibonelela ngeevenkile ezininzi, iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela eziqhelekileyo nezingaqhelekanga, ii-tapas bar kunye nazo zonke iinkonzo umntu anokuzinqwenela.
INdalo engummelwane yaseSierra de Almijara inikezela ngamathuba angenamkhawulo wokuhamba, ukusuka kuhambo lweyure e-1 ukuya kuhambo losuku lonke. Lo mmandla waziwa ngezilwanyana zasendle ezityebileyo nezahlukeneyo kunye neendawo ezibukekayo. Ukuqhuba ukuya kwimithombo yaseRio de la Miel kunye nePeña Escrita kubonisa iindawo ezintle zeentaba.
Ummandla ubonelela ngemisebenzi emininzi: ukuhamba, ukuhamba ngebhayisekile yeentaba, iphenyane, i-paddle surf, i-snorkeling, i-scuba diving, i-rilk trekking, ukukhwela ihashe, i-jeep excursions, i-tennis, igalufa kwi-20km nangaphezulu. Ummandla utyebile kakhulu kwinkcubeko, izikhumbuzo kunye neendawo zembali. Imiqolomba edumileyo yeNerja ikwi-10km nje.
Kwisithuba sesiqingatha sosuku okanye uhambo losuku, inani leendawo ezidumileyo zehlabathi zinokutyelelwa: iGranada kunye neAlhambra, iSevilla, iCórdoba, iRonda, iSierra Nevada, iAlmería neGibraltar.
Ngamafutshane, indawo efanelekileyo yokuphumla kunye neholide ekhuthazayo phakathi kwendawo yendalo egcinwe ngokupheleleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Aquavia
Inombolo yomthetho: CR-MA-01681
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$111
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nerja